Ninkii hadlayaaba ha iska hadlee, Alleylehe Hargeysi way hadashay (Qormo Wasiir hore) - Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Xadiga cododka xad dhaafka ah, ee xildhibaan Barkhad Batuun iyo C/kariin Axmed Mooge, maanta ay heleen, waa kuwo ugub ku ah saaxada doorashooyinka goloha wakiilada iyo golaha degaanka jamhuuriyadda Somaliland.
Waxaa hubaal ah, in arrintani ka turjumayso bilowga iyo balaysinka bisaylka bulshada reer Hargeysa. Sidookale, waxay ka turjumaysaa boholyoowga iyo baahida loo qabo xildhibaano qaran, oo aan lagu soo dooran isirkooda iyo ardaayadooda.
Hasayeeshee, lagu soo doorto aragtidooda, aqoontooda, iyo iimaankooda. Eebe mahadii, tani waa talaabo loo qaaday xagga wanaagsan. Beynoow!, saaka ayuun baan arkaa in uu hirgalay, halku dhigii hagaasay ee aanu adeegsan jirnay, odayadayadii reer Kulmiye xilligii ololaha doorashada madaxtooyada 2017-kii, kaas oo ahaa (Horaa loo soconayaa) iyo (Bari maanta ka fiican).
Hambalyo bulshada Somaliland. Hambalyo labadan xildhibaan, iyo kuwa kale ee guulaystayba. Ninkii hadlayaaba hayska hadlee, alleylehe Hargeysi way hadashay. Ha beenaan baan leeyahay. Dareenkani waa fariin cad oo ka timi cod bixiyayaasha caasimada dalka waxaan leeyahay haldoorku wuu garanayaa, hasayeeshee hebed, hiin-raac, hanfade iyo nin hunguri qaatay oo dan gaar ah ku haliilayaa toona loo sheegi maayo.
Ugu danbayn, waxaan leeyahay saaxiibaday xil Barkhad iyo C/kariin, taageerayaashiinii u badnaa da’yarta waxay xaqiijiyeen hamigoodii, waxay rumeeyeen riyadiinii iyo rajadiinii siyaasadeed. Balse nimay ku hadhay ayay hawli haysaa, ee waxaa si weyn loo eegayaa sida aad uga abaal-celisaan codadka amaahda ah ee la idin siiyay. Taas oo nasiib wanaag aanay asaagiin helin.
Saaxiibayaal, murti soomaaliyeed baa tidhaahda (nasab waa kii abaal guda).
W/Q: Wasiir hore Maxamuud Xaashi.